Dukaanka Khaanadda Macaamiisha ee ugu Fiican Khadka
Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa ku socda waddada si uu u soo bandhigo iibinta wuxuuna i weydiistay talo dhejisyada laptop Laptop-kiisa gaarka ah iyo sidii uu uga tagi lahaa macaamiishiisa iyo macaamiisheeda. Daacad baan ka noqon doonaa in aan ka dalbaday dhejiska onlaynka iyo dhejiska keliya ee tayo sare leh ee aan waligay ku helay qiimo wanaagsan iyo beddel weyn Calan Mule.
Furaha dookhaygu waa dhejiye si fudud uga soo baxa iyada oo aan la jeexin oo noqda qas weyn. Waxaan si joogto ah u iibsanayaa aalado iyo weelal cusub, badanaana waan bixiyaa ama iibiyaa kuwii hore. Haddii aad haysato istiikaar raqiis ah, waa wax aan macquul aheyn in meesha laga saaro iyada oo aan la helin kiimikooyinka saxda ah. Sticker Mule mar walba waxay soo dirtaa dhejiyeyaal, xitaa sanado ka dib, ka siib hal xabbo oo wanaagsan. Waxaan aaminsanahay inay tahay isku -darka tayada dhejintooda iyo dhejintooda oo aad u wanaagsan.
Baqlaha Istikarada: Istiikarada Caadiga ah
Calan Mule Istiikarrada waxaa ka muuqda laminate khaas ah oo ka ilaalinaya in ay soo gaadhaan dabaysha, roobka, iyo iftiinka qorraxda. Xitaa waxaad ku ridi kartaa makiinada weelkaaga oo ka soo bixi iyagoo u muuqda kuwo cusub.
Calan Mule waa habka ugu dhaqsaha badan uguna fudud ee lagu iibsan karo badeecadaha caadadu daabacan tahay. Dalbo 60 ilbidhiqsi waxaannu u beddeli doonaa nashqadahaaga iyo sawirradaada dhejisyo caadooyin ah, birlabyo, badhanno, summad, iyo baakad maalmo gudahood. Waxay bixiyaan caddeyn onlayn ah oo lacag la’aan ah, maraakiib caalami ah oo lacag la’aan ah, iyo soo noqosho aad u dhakhso badan.
Calan Mule wuxuu bixiyaa dhejisyada vinyl, dhejiska googo'an, dhejiska goobaabinta, dhejiyeyaasha leydiinka, dhejiska labajibbaaran, dhejiska oval, dhejiska dhejiska, waraaqaha dhejiska, dhejiska dhejiska dhejiska, dhejiyeyaasha wareejinta, dhejiyeyaasha geeska wareegsan, dhejiska cad, cajalad caado ah, qaybiyeyaasha sumadda, birlabyada , badhamada, iyo xitaa cajaladda baakadaha.
Dalbo dhejisyadaada ilbidhiqsiyo oo hel caddayn onlayn ah oo bilaash ah, dhoofinta adduunka oo dhan oo bilaash ah, iyo soo noqosho aad u dhakhso badan.
Iibso Istiikarrada Hadda
Tags: dhejimaha ugu fiican ee internetkaku dheji dhejisyobadhankawareegyada wareegaxaashiyaha cadcajalad caado ahdhimato dhejiskaistiikaro gooyaydhunkado istiikaroqaybiyeyaasha sumaddahargaha laptop-kabirlabxaashiyaha xumaacalaamadaha isweydaarsiga leydiistiikarada geeska wareegahargaha casriga ahdhejisyo labajibaarandhejiyeyaal dhunkasho gooyaybaqal istiikar ahxaashiyaha warqadaha dhejiska ahstickerskala -wareejinta dhejiskaistiikarada vinylka